Susa indawo yeefoto zakho ngeNoLocation, yasimahla okwexeshana | IPhone iindaba
Ngokuzenzekelayo, i-iPhone yethu Iirekhodi kwifoto nganye kunye nevidiyo esiyithathayo, uququzelelo lwe-GPS yendawo apho zenziwe khona. Oku kusivumela ukuba sikhangele kwiindawo ngendlela elula kakhulu kwaye ikwahlula ngokuzenzekelayo imifanekiso, ukuze kuthi xa sifuna ukubona iifoto zohambo lwethu eMadrid, kufuneka siye kwimephu apho isicelo sisibonisa khona iiFoto, ukuya eMadrid kwaye ucofe ingqokelela yeefoto ezibonisiweyo.
Oku kuhle kakhulu xa kufikwa ekuhleleni iifoto, ngakumbi ukuba sinobunzima beWilly Fog. Kodwa hayi rhoqo ngamanye amaxesha, singangabinamdla wokwabelana ngeyona ndawo kanye sithathe kuyo ifoto. Izizathu endizishiya kukhetho lwakho kwaye ukuba siyayicinga, zinokuba zininzi ...
Isicelo esithetha ngaso namhlanje, uNoLocation, sisicelo esilula esizikhathalela ngokuzenzekelayo cima lonke ulwazi olunxulumene nokulungelelaniswa kweGPS ezirekhodwe kwimifanekiso okanye iividiyo esizenzayo nge-iPhone yethu, ukuze xa sabelana ngazo nabantu besithathu, abazi ukuba zenziwe phi.
Ngelixa kuyinyaniso oko sinokungasebenzi indawo ye-iPhone yethu Xa singafuni ukuxoxa ngendawo, kodwa ukongeza ekusonzakaliseni xa kuziwa ekuhleleni imifanekiso, yingxaki ukuba kufuneka sisebenze kwaye singasebenzi indawo yesixhobo sethu ekubambeni okanye kwividiyo nganye esiyenzayo.
I-NoLocation inexabiso eliqhelekileyo kwiVenkile yeVenkile ye-4,49 ye-euro, kodwa kangangexesha elincinci sinokuzikhuphela ngokupheleleyo kwikhonkco endilishiya ekupheleni kweli nqaku. Kungenzeka ukuba ngexesha lokupapasha eli nqaku, iplagi ebonisa usetyenziso kunye nokunxibelelana ne-iTunes akuhlaziyanga xabiso. Ukujonga, kuya kufuneka ucofe kuyo ukuze uvule Ivenkile yeeVenkile kwaye ujonge ukuba isathengiswa okanye ngelishwa awukafiki ngexesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Susa indawo yeefoto zakho ngeNoLocation, yasimahla okwexeshana